FAHALASAN’I BRUNO RAISNER : Nampiseho firaisankina ny mpanakanto teto Toamasina
Ny maraimben’ny alarobia 11 janoary no nigadona teto Toamasina ny fiara nitondra ny tranovorona misy ny nofo mangatsiakan’i Bruno Raisner, mpanakanto isan’ireo andrerezin’ny kanto malagasy, izay nodimandry tao Antananarivo ny alatsinainy 9 janoary lasa teo iny, vokatry ny aretina nahazo azy. 12 janvier 2017
Avy hatrany dia nivantana teny Tanamborozano, misy ny trano fonenan’ny zokiny ny razana. Manoloana izany indrindra, nampiseho firaisankina ireo mpanakanto rehetra teto Toamasina, niondrika am-panajana nanome voninahitra ny fahalasan’ity naman’izy ireo. Tonga tao avokoa ireo mpiara-nihira taminy dia ireo mpanao kaiamba, tao ihany koa ireo mpihira zandriny izay samy vonton’alahelo sy latsa-dranomaso manoloana ny fahalasan’i Bruno Raisner.
Teo anatrehan’ny mpanao gazety no nanambaran’izy ireo fa “olon’ny fiaraha-monina : tsotra ary tsy mba nanam-pahavalo ity mpanakanto lavo ity. Manana fahaizana manokana eo amin’ny famoronana i Bruno Raisner, ary tsy mety lefy laza hatram’izao ny sangan’asany, ohatra amin’izany : zandriko, ary kotrobaratra”. Ankoatra ireto mpanakanto ireo dia tonga namangy ny fianakaviana ihany koa ny fianakaviamben’ny haino aman-jery VIVA Toamasina, izay notarihin’ny Talen’ity haino aman-jery ity, Francois Kany sy ireo solontenan’ny mpiasa vitsivitsy.
Tsy nifanalavitra fa niara-niasa mandrakariva tamin’ireo haino aman-jery hatrany mantsy i Bruno Raisner, ary anisany hira be mpangataka indrindra ny sangan’asany, nandritra ny vanim-potoana lavalava.
Ankoatra ny fiandrasana ny razana tao amin’ny tranon’ny zokiny dia nentina nomem-boninahitra teny amin’ny kianja mitafon’i Soavita ny razana ny folakandron’ny alarobia 11 janoary io ary nandrasana tao mandra-maraina. Araka izany ny maraimben’ity alakamisy 12 janoary ity no nihazo an’i Sainte-marie ny razana. Sainte-marie izay misy ny toerana hanitrihana ny nofo mangatsikan’ i Bruno Raisner
Namela kamboty 6 mianadahy izy sy mananotena. Amin’ny maha mpanakanto andrerezina azy dia notoloran’ny fanjakana mari-boninahim-pirenena, Chevalier de l’ordre national Malagasy i Bruno Raisner.